.ရန်ကုန်က ကန်ဘောင်နဲ့ ပန်းခြံတွေ မနက်ဖြန် ပြန်ဖွင့်ပြီ (အားကစား ပြန်လုပ်နိုင်ကြပါပြီ). – Askstyle
.ရန်ကုန်က ကန်ဘောင်နဲ့ ပန်းခြံတွေ မနက်ဖြန် ပြန်ဖွင့်ပြီ (အားကစား ပြန်လုပ်နိုင်ကြပါပြီ).
ရန်ကုန်က ကန်ဘောင်နဲ့ ပန်းခြံတွေ မနက်ဖြန် ပြန်ဖွင့်ပြီ (အားကစား ပြန်လုပ်နိုင်ကြပါပြီ)
ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ရန်ကုန်တိုင်းထဲက ပန်းခြံနဲ့ အားကစားကွင်းတွေကို မနက်ဖန် ဇန်နဝါရီ(၂၁)ရက်နေ့ကစပြီး ပြန်စဖွင့်လို့ရတဲ့အကြောင်း ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက သိရပါတယ်။
ပန်းခြံနဲ့ အားကစားကွင်းတွေကို ပိတ်ထားဖို့ ရက်ကန့်သတ်ထားတာဟာ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ(၂ဝ)ရက်နေ့မှာ (၁) လပြည့်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ပြန်ဖွင့်ဖို့ တင်ပြလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနက အကြောင်းပြန်ကြားလာတာလို့ သိရပါတယ်။
“ညွှန်ကြားစာမှာတော့ ကိုဗစ်စည်းကမ်းနဲ့အညီ ဖွင့်လှစ်သွားရမယ်လို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ အခုလိုင်းပေါ်မှာ တွေ့နေရတာက မနက်(၉)နာရီကနေ ညနေ(၅)နာရီလို့လည်းတွေ့တယ်။ မနက်(၅)နာရီကနေ မနက်(၉)နာရီ အထိလို့ လည်းတွေ့တယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ညွှန်ကြားစာထဲမှာတော့ ဖွင့်မယ့်အချိန်အတိအကျသတ်မှတ်ပေးထားတာ မပါဘူး။”လို့ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် ဦးသူရအောင်က ပြောပါတယ်။
အချိန်ပိုင်းသတ်မှတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားကစားလုပ်ဖို့ ရည်ညွှန်းပြီး သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း ဦးသူရအောင်က ပြောပါသေးတယ်။
ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းကာလထဲ လူစုလူဝေးတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းက ပန်းခြံနဲ့ အားကစားကွင်း တွေကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့က စပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အများပြည်သူနေရာတွေနဲ့ ပန်းခြံတွေထဲမှာရှိနေတဲ့တချိန်လုံး ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းစည်း(Mask)ကို အမြဲတပ်ဆင်မှသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ရန္ကုန္က ကန္ေဘာင္နဲ႔ ပန္းၿခံေတြ မနက္ျဖန္ ျပန္ဖြင့္ၿပီ (အားကစား ျပန္လုပ္ႏိုင္ၾကပါၿပီ)
က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ရန္ကုန္တိုင္းထဲက ပန္းၿခံနဲ႔ အားကစားကြင္းေတြကို မနက္ဖန္ ဇန္နဝါရီ(၂၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး ျပန္စဖြင့္လို႔ရတဲ့အေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရပါတယ္။
ပန္းၿခံနဲ႔ အားကစားကြင္းေတြကို ပိတ္ထားဖို႔ ရက္ကန႔္သတ္ထားတာဟာ ဒီေန႔ ဇန္နဝါရီလ(၂ဝ)ရက္ေန႔မွာ (၁) လျပည့္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျပန္ဖြင့္ဖို႔ တင္ျပလာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာတာလို႔ သိရပါတယ္။
“ၫႊန္ၾကားစာမွာေတာ့ ကိုဗစ္စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ဖြင့္လွစ္သြားရမယ္လို႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ အခုလိုင္းေပၚမွာ ေတြ႕ေနရတာက မနက္(၉)နာရီကေန ညေန(၅)နာရီလို႔လည္းေတြ႕တယ္။ မနက္(၅)နာရီကေန မနက္(၉)နာရီ အထိလို႔ လည္းေတြ႕တယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ ၫႊန္ၾကားစာထဲမွာေတာ့ ဖြင့္မယ့္အခ်ိန္အတိအက်သတ္မွတ္ေပးထားတာ မပါဘူး။”လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးသူရေအာင္က ေျပာပါတယ္။
အခ်ိန္ပိုင္းသတ္မွတ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားကစားလုပ္ဖို႔ ရည္ၫႊန္းၿပီး သတ္မွတ္လိုက္တာျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ဦးသူရေအာင္က ေျပာပါေသးတယ္။
ကိုဗစ္ ဒုတိယလႈိင္းကာလထဲ လူစုလူေဝးေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းက ပန္းၿခံနဲ႔ အားကစားကြင္း ေတြကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႔က စပိတ္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေနရာေတြနဲ႔ ပန္းၿခံေတြထဲမွာရွိေနတဲ့တခ်ိန္လုံး ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းစည္း(Mask)ကို အၿမဲတပ္ဆင္မွသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳသြားမယ္လို႔လည္း က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။